Unai Emery oo si weyn u amaanay xiddiga ay Arsenal qarka u saaran tahay inay lasoo wareegto ee Dani Ceballos – Gool FM
(London) 23 Luulyo 2019.Tababaraha kooxda Arsenal ee Unai Emery ayaa ka hadlay warar sheegaya in Gunners ay xiiseenayso lasoo saxiixashada xiddiga reer Spain iyo Real Madrid ee Dani Ceballos inta lagu jiro suuqa kala iibsiga ee xagaaga.
Unai Emery ayaa shir jaraa’id uu kasoo muuqday kahor ciyaarta caawa saqda dhexe ay la ciyaari doonaan Real Madrid wuxuu kaga hadlay wararka xanta ah ee ku saabsan inay xiiseenayaan Dani Ceballos.
“Waa ciyaaryahan aad u wanaagsan, waan aqaanaa isaga ilaa markii uu joogay Betis iyo Real Madrid, wuxuu ka ciyaari karaa lambarka 8-aad iyo lambarka 10-aad”.
Arsenal ayaa qarka u saaran inay la soo saxiixato Dani Ceballos, kaasoo diyaar u ah in heshiis amaah ah uu kaga dhaqaaqo kooxdiisa Real Madrid, si uu u helo koox uu ka heli karo fursado badan uu ku ciyaari karo, kaddib mudo laba xili ciyaareed ah uu daris la noqday kursiga keydka.
Sida laga soo xigtay wargeyska Isbaanishka ah ee “Marca” heshiiska Dani Ceballos ayaa lagu wadaa in Arsenal ay maanta oo Talaado ah si rasmi ah ugu dhawaaqi doonto heshiiskiisa, Gunners ayaana qorsheyneysa in xiddigan reer Spain ay sanadkii mushaar ahaan u siin doonto 2.7 milyan ginni.
ku dhawaaqista rasmiga ah ee heshiiska ayaa dhici doonta Talaadada ka dib markii labada koox ay ku kulmeen Koobka International Cup, waxaana qoryaha qaadan doona mushaharka ciyaaryahanka ee sannadkii 2.7 milyan ginni.
“Sharaf ayey ii tahay xiisaha kooxda Barcelona”